La liga - Experience Best News from Nepal
आइत, मंसिर २९, २०७६
La liga बाट
बेन्जिमाले पुरा गरे ११ गोल, बार्सिलोनाको खेल अगाबै मड्रिड शिर्ष स्थानमा !!
ला लिगा फुटबल १६ चौ चरणको खेल अन्तर्गत एस्पाइनोल् विरुद्ध रियल मड्रिडले आफ्नो घरेलु मैदान सान्टियागो बर्नाबेउमा २-० को सहज जित निकालेको छ । जितका निम्ति फरवार्ड बेन्जिमा र डिफेन्डर भरानले १ १ गोल गरेका थिए भने फर्लान मेन्दी...
डिफेन्डर कै गोलमा मड्रिडको जित !! मड्रिड शिर्ष स्थानमा
२ डिफेन्डरको गोलसंगै डिपोर्टिभो अलाभेसलाई पराजित गर्दै रियल मड्रिड ला लिगा अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । शनिबारको खेलमा रियलले अलाभेसमाथि २-१ गोल अन्तरको जित निकालेको हो । जितसँगै रियलले १४ खेलबाट ३१ अंक भएको छ । रियलभन्दा एक खेल...
जागिर नै जोगाइदिएका मेस्सी प्रति के भन्छन भल्भार्डे !!
बार्सिलोना प्रशिक्षक एर्नेस्टो भल्भार्डेले मैदानमा मेस्सी रहे असम्भब भन्ने कुरा खेलमा नरहने ब्यक्त गरेका छन् । सेल्टा भिगो विरुद्ध मेस्सीले गरेको ह्याट्रिक गोल प्रति प्रशिक्षकले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् । केहि खेलहरु पश्चात भल्भार्डे निकै तनावग्रस्त देखिएका थिए तर...
रोनाल्डोको ह्याट्रिक रेकर्डमा मेस्सी, बार्सिलोनाको सानदार जित !!
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाले सेल्टा भिगोलाई पराजित गरेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा घरेलु टोली बार्सिलोनाले सेल्टा भिगोलाई ४–१ गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । बार्सिलोनाका लागि कप्तान मेस्सीले ह्याट्रिक गोल गरे । त्यस्तै, सर्जियो बुसक्वएटको नाममा एक गोल...
बार्सिलोनासंगको दुरी घटाउदै मड्रिड, लेगानेस माथि फराकिलो जित !!
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिडले लेगानेसमाथि फराकिलो जित हात पारेको छ । बुधबार राति भएको खेलमा रियल मड्रिडले आफ्नै मैदानमा लेगानेसलाई ५-० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । रियलको जितमा सिल्भा डि गोयज, टोनी क्रुस, सर्जियो रामोस, करिम बेन्जिमा र...
मेस्सीको २ गोलमा बार्सिलोनाले निकाल्यो फराकिलो जित !! बार्सिलोना शिर्ष स्थानमा
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन क्लब बार्सिलोनाले रियल भालाडोलिडलाई पराजित गर्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । मंगलबार राति आफ्नै मैदान नाउ क्याम्पमा भएको खेलमा भालाडोलिडलाई ५-१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो । बार्सिलोनाको जितमा कप्तान लियोनल...
एल क्लासिको स्थगित हुनुको मुख्य कारण यस्तो !!
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा एल क्लासिको खेल स्थगित भएको छ । स्पेनिस फुटबल महासंघले यही अक्टोबर २६ गते रियल मड्रिड र बार्सिलोनाबीच हुने खेल स्थगित गरेको हो । क्याटलोनिया स्वतन्त्रतालाई लिएर ९ जना नेताहरुलाई जेल हालेपछि बार्सिलोनामा विरोध प्रदर्शन...
ला लिगाकै सर्वाधिक गोलकर्ता बार्सिलोना स्टार “लिओनेल मेस्सी” !!
अर्जेन्टिनी एवं बार्सिलोना स्टार लिओनेल मेस्सी ला लिगाकै सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् । ला लिगा लिग फुटबलमा लिओनेल मेस्सीको ४५४ खेलमा सहभागी रहेको छ जसमा मेस्सीले ४१९ गोल गर्न सफल भएका छन् । अझै पनि बार्सिलोनाका निम्ति ब्यबसायिक फुटबल खेलिरहेका...
राति क्याम्प नाउमा बार्सिलोना विरुद्ध भिल्ला रियल भिड्दै !!
छैटौ चरण ला लिगा खेल आजबाट सुरु हुदै छन् । आज हुने पहिलो खेलमा भल्लाडोलिड र ग्रानाडा २२:४५ मा हुनेछ भने ११:४५ मा बेटिस र लिभान्टे भिड्ने छन् । आज अर्को खेल ला लिगा विजेता बार्सिलोना र भिल्ला रियल...
मेस्सी बिना नै घरेलु मैदानमा बार्सिलोना उत्रिदै !! आज राती हुदै छ खेल !!
स्पेनिस ला लिगा फुटबल अन्तर्गत आज राति बार्सिलोना र रियल बेटिस खेल्दैछन् । खेल नेपाली समय अनुसार पौने १ बजे नाउ क्याम्पमा हुनेछ । आजको खेलमा पनि लियोनल मेस्सी बार्सिलाेनाकाे टिममा हुने छैनन् । केही साताअघि प्रशिक्षणका क्रममा घाइते...
१रोनाल्डोको २ गोलमा युभेन्ट्सको सहज जित !! मिलानको खेल अगाबै युभेन्ट्स शिर्ष स्थानमा !!
२लगातार चौथो खेलमा रोनाल्डोको गोल !! हाफ अघि नै रोनाल्डोको २ गोल !! युभेन्ट्स ३ गोलले अग्रता
३इलियानाको यस्ता तस्बिर बाहिरएपछी बलिउडमा मचियो हंगामा !! हेर्नुहोस तस्बिर
४यी ५ क्षणहरु जुन रोनाल्डोको यस दशक कै ठुलो क्षण बन्न पुग्यो !!
५सुनको भाउ बढ्यो ! कति छ त आज
६टाइटल होडमा लिभरपूल, सलाहको २ गोलमा वार्टफर्ड माथि जित !!
७सामाजिक संजाल फेसबुकमा करिश्मा यस कारण भड्किन !!
८रियल सोसाइडाड विरुद्ध मेस्सीको दिन खराब हुनेछ : इमानोल अल्गुवासिल
९पाकिस्तानी गायिकाको नग्न तस्बिर र भिडियो लिक भयो !! भिडियो युट्युबमा भाइरल
१०रोनाल्डिन्हो भन्छन मेस्सी सदावहार उत्कृस्ट खेलाडी होइनन् !! मेस्सीको तुलना पेले, रोनाल्डो र म्यारोडोनासंग ?
११रिपोर्ट भन्छ रोनाल्डो अन्तिम १६ मा मड्रिडको सामना गर्न चाहदैनन् !! यस्तो छ कारण ?
१२‘दबंग ३’ को क्लाइमेक्स : ५ सय गुण्डासँग एक्लै भिड्दै सलमान
१३११ मिनेटमा ४ गोल !!
१४पर्दा पछाडी यति हट श्रृष्टी
१५आलिया भट्ट बनिन् एसियाकै सबैभन्दा सेक्सी महिला
१६यी हुन् शारीरिक सम्पर्क नगर्दा आउने समस्याहरु
१७४ स्वर्ण जितेकी गौरिकाले ५६ लाख पाउने
१८बिहिबार देशभर सार्वजनिक विदा !
१९कपिल शर्मा बने छोरीका बुवा
२०गर्भावस्थामा शारिरिक सम्पर्क कसरी राख्ने ? अपनाउनुहोस् यस्ता नयाँ तरिका